Adophe Ngombo: mgbe ihe dị njọ maka onye ojii / onye Africa, onye chọrọ ịdị ọcha; amụrụ oji, o rọrọ nrọ ị ga-acha ọcha, ọ chaghị acha na enweghị isi; Ọ bụ na Chineke Izrel emeghị mmadụ n’onyinyo ya? N’agbanyeghi mkpughe nke a site na akwukwo nsọ ha, enwere ndi họọrọ ịzọ ya site na ịnwa ịghara ịnọ n’oyiyi nke Chineke nke Israel.
Site na: KongoLisolona: July 10, 2020 11: 57 Enweghị asịsa
Otu nwoke amụrụ n’Afrịka, nke nwere ụcha ojii, juputara n’usoro ya wee chọọ isonye n’òtù ndị ọcha o chere na ọ bụ ọdịnihu ya. Ejuru komputa a ...	GỤKWUO
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị naghị elekọta uwe mwụda egwuregwu gị: ihe mkpuchi ahụ bụ maka onye nchụàjà, jersey bụ maka onye egwuregwu
Site na: KongoLisolona: Mee 25, 2020 10: 15 Enweghị asịsa
Cheedị na ọ bụrụ na ụkọchukwu ahụ eyiri akwa dị unyi, ọ gaghị enwe ụdị mmasị ahụ o nwere mgbe niile maka ụmụazụ ya kwesịrị ntụkwasị obi "Otu a na-aga maka egwuregwu juu	GỤKWUO
Humansmụ mmadụ, ọkachasị ụmụ agbọghọ, ị ga-emerịrị uwe dị mma tupu ịhapụ ụlọ gị: ọrịa ụfọdụ nwere ike ịbụ ihe mmụta nye ndị na-eyi uwe dị oke njọ "Nwa agbọghọ nke ejiji sexy onye zọri n'okporo ụzọ na-ele ya anya Onye ọ bụla maara, ọ na-eyi obere obere panty ”
Site na: KongoLisolona: Mee 25, 2020 06: 33 Enweghị asịsa
Chegodi mgbe ọnya ọgbụgba dị elu dakwasịrị ya "Ọ bụ ọdachi" Ikwesịrị ịchọ okwu ọzọ. Maka na okwu ahụ bụ njakịrị ma ọ bụ ihere ekwesighi. Ọ dị otú ahụ ...	GỤKWUO